တရုတ်ပရိတ်သတ်တွေကလဲ အင်အားကြီးမားပါတယ် ။
သူတို့ရဲ့ တရုတ် Idol တွေထဲ ကိုရီးယား Idol တွေနဲ့အောင်မြင်မှုတူလို့
တရုတ် Yoona နဲ့ တရုတ် Suzy လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခံရသူ နှစ်ဦးရှိပါတယ် ။
သူတို့ကတော့ SSNH48 Team NII အဖွဲ့ဝင် Ju Jingyi နဲ့ Xu Jiaqi တို့ပါပဲ ။
သူတို့ရဲ့လှပမှုနဲ့ ငယ်ရွယ်တတ်ကြွမှုတွေအတွက် လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးခံရသူတွေပါ ။ သူတို့ရဲ့ Fan မဟုတ်သူတွေတောင်မှ
သူတို့ရဲ့ အလှအပကိုသတိပြုမိပါတယ်တဲ့ ။
1. SNH48 Team NII‘s Ju Jingyi
Idol တစ်ယောက်အဖြစ်ပွဲဦးမထွက်ခင်က သူမက မော်ဒယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူပါ ။
သူမရဲ့ အလှအပနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် Fan တွေက အနှစ်လေးထောင်မှာ တစ်ခါပေါ်တဲ့ Idol လို့တောင်နာမည်ပြောင်ပေးထားကြပါတယ် ။
Japan media တွေကတော့ သူမကို အနှစ်လေးထောင်အတွင်း တရုတ်ရဲ့ နံပါတ်တစ် အလှမယ်လေးပါလို့ ဖော်ပြပါတယ် ။
2. SNH48 Team SII‘s Xu Jiaqi
သူမကတော့အလှအပတင်မကပဲ အကမှာပါ အရည်အချင်းထူးချွန်သူအဖြစ်လူသိများပါတယ် ။
သူမတို့ ချစ်စရာမကောင်းဘူးလား ? ဘယ်သူက Yoona နဲ့ တူပြီး ဘယ်သူက Suzy နဲ့တူတာလဲ မှန်းသွားကြည့်ပါလား သူငယ်ချင်းတို့ရေ ...